Fanesorana tsena amoron-dalana Polisy iray naratra, nokasihan-tanana
Polisy monisipaly iray no naratra sy voakasi-tanana nandritra ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana teo Analakely teny amin'ny manodidina ny Tripolitsa,
Distrikan Amboasary Hahazo tohana aminny alalanny tetikasa « Fagnavotse »
Mitohy hatrany ny fanohanana entinny PAM na ny « Programme Alimentaire Mondial » manoloana ny kere sy ny fahantrana lalina any aminny faritra Atsimonny Nosy.
Ady aminny tsy fanjarian-tsakafo Mitohy ny fitsirihina ao Tsihombe
Mitohy hatrany ny hetsika fanampiana ireo olona sy ankizy tratry ny tsy fanjarian-tsakafo, ao aminny kaominina Tsihombe.
Ambohibao Antehiroka Tsy mety ny hafindra toerana ireo mpivarotra amoron-dalana
Tsy ekenny mpivarotra amoron-dalana, eny Ambohibao Antehiroka, ny hanesorana azy ireo aminny toerana misy azy ankehitriny.
Kere any Atsimo Mandripaka tanàna maro
Mandripaka olona maro fa indrindra ireo zaza ny kere any Atsimo aminizao fotoana ary tsy mitsaha-mitombo ireo kaominina tratrany. Ankoatra ny kaominina Befotaka, Behara, ary Ebelo izay hita any Amboasary dia misy kaominina 7 vaovao voakasika koa ankehitriny.
Ady mivady tao Sambava Nodoran-drangahy ny vola sy ny akanjo
Niakatra fokontany, ny alarobia lasa teo, ny adina mpivady iray tany Andrasaha Ambinany Sambava. Noho ny tsy fitovian-kevitra dia niady izy mivady ireto.
BORIBORINTANY FAHATELO Efa mandeha ny asa hiatrehana ny fotoam-pahavaratra
Vonona hiatrika ny fotoam-pahavaratra ny Boriborintany fahatelo, tarihinny delege Ramiandrisoa Rabaritsimba Lalaina.
Ady aminny tsy fanjariantsakafo any Atsimo Dokotera sy paramedy 30 nidina ifotony
Nanainga ny alahady teo teny aminny tokontaninny hôpitaly HJRA Ampefiloha, hihazo ireo faritra any Atsimo izay tena iharanny trangana tsy fanjariantsakafo,
Olanny famatsian-drano Hampitomboana ny « citernes » hamatsy rano ireo faritra tsy mahazo izany
Taorian'ny fidinana ifotony nataonny Jirama teny amin'ireo kaominina tena sahirana amin'ny fahazoana rano fisotro madio, ny herinandro lasa teo, dia niroso tamin'ny fametrahana ireo "citernes" fanampiny izy ireo, omaly alatsinainy.